Ngwaọrụ kachasị njọ nke 2017 | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-abịaru njedebe nke 2017, otu afọ n'ime nke anyị ahụla ngwa ọhụụ ọhụụ, mana anyị ahụla ọtụtụ ngwaọrụ n'agbanyeghị atụmanya ha zụlitere, ha agafeela ahịa na-enweghị ihe mgbu ma ọ bụ otuto, n'ihi nrụrụ ya, ụgha dị n'azụ echiche ahụ, enweghị nkwado kemgbe mmalite ya ...
Ọ bụrụ na anyị akwụsị iche maka ngwaọrụ ndị rụgoro ihe ịga nke ọma na afọ niile, n’ezie anyị na-echeta Nintendo Switch, Xbox One X, iPhone X, Galaxy S8… Mana anyị niile na-echeta ngwaọrụ ndị a. Iji nwaa ime obere nchekwa, n’isiokwu a, anyị ga-egosi gị ndị bụbu Ngwa kachasị njọ nke 2017.
1 Ihe ọ .ụ .ụ
5 Okwu okpu Atari
8 Ihuenyo Snapchat
10 Ezigbo mkpa
Agbanyeghị na amụrụ echiche mbụ nke Juicero na 2016, ọ bụ rue 2017 mgbe ọ malitere iru ahịa. Ya amalite price bụ $ 700, a price na e mesịrị lowered ka $ 400 na na-na-eji maka eme ka ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi na akwukwo nri nke onye nrụpụta rere wee chekwaa na akpa, ya mere, anyị enweghị ike iji ngwaahịa ndị anyị nwere n'ụlọ anyị mee ihe ọ juụ juụ na-atọ ụtọ ọ kwere nkwa. Ọzọkwa, ihe ọicesụicesụ ndị ahụ dị site na ndenye aha naanị ma ọnụahịa dị n'etiti $ 4 na $ 10.
Iji bulie ihe niile, wee gosipụta ajọ echiche ọ bụ site na mbido, ụmụ okorobịa nọ na Bloomberg na-eme nyocha nke ha gosipụtara etu esi banye n'ime akpa ihe ọ juiceụ juiceụ nke Juicero si wepụ ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ, enwere ike iji aka wepu aka gi, na-enweghị ngwaọrụ dị mkpa n'oge ọ bụla. Companylọ ọrụ ahụ nabatara nloghachi nke ngwaọrụ niile erere ruo ugbu a wee nyeghachi ndị ọrụ ego ahụ.
Mkpogharị mobiles nke na-enye anyị ohere ịbawanye nha ihu, taa ka bụ utopia nke doro anya na n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọnọdụ, ọ bụghị dịka nchọpụta nke ZTE wepụrụ aka ya, na-arapara na ihuenyo nke abụọ na ama ama. ZTE Axom M, bụ n'ezie smartpohone ọdịnala, nke nwere ike igosi ihuenyo nke abụọ site na ala ya, si otú ịgbasa desktọọpụ na mmekọrịta ebe-enye anyị ihe fọrọ nke nta 6,75 sentimita asatọ nke ihuenyo, o doro anya na iche site etiti nke ma.
Ihe jikọtara ọdịdị nke abụọ meziri, àjà a format yiri 4: 3 nke omenala tube televishọn, Ọ na-emebi ọtụtụ ohere mgbe ị na-ekiri vidio. Batrị nke ngwaọrụ ahụ, ijikwa ihe ngebichi abụọ, na-ewe obere awa iji igwe abụọ, na ọbụna otu, igwefoto na-enye anyị nsonaazụ na-adịghị mma, ọ dị oke oke, 1,21 cm, iji nwee ike iburu ya nke ọma na trouser akpa.
Ngalaba smartwatches nke gam akporo Wear jisiri, enwebeghị ezigbo afọ. Ọtụtụ abụrụla ụlọ ọrụ n'ihi na nleghara anya nke Google, kwụsịrị ịkwụsị ụdị ọhụrụ na ahịa dịka Motorola na Asus. Agbanyeghị, LG gosipụtara ma gosipụta LG Watch Style na mbido afọ a, smartwatch nke Ekwere m ha nkwa obi ụtọ ugbu a na o nwere ohere karịa ime nke ọma. Mana ngwaọrụ a bụ ihe nzuzu nke na ọ kpochapụrụ njem ọ bụla nke ụlọ ọrụ Korea na ngalaba a n'ime afọ.
Iji malite, ikike obodo nke otu n'ime ihe kacha njọ n'ahịa, na-enwe obodo kwụụrụ onwe ya nke ruru awa iri na abụọ, n'agbanyeghị ọnụahịa mmalite: $ 12 gbakwunyere ụtụ isi, ọnụahịa nke ị nwere ike ịchọta smartwatches nwere obere njirimara mana enwere ikike nnwere onwe ka ukwuu. Imirikiti weebụsaịtị ndị nwere ohere ịnwale ngwaọrụ a nyere ya akara dị nnọọ nso na ndị akwadoro. N'ezie, LG egosighi usoro ọ bụla na mpaghara a ọzọ, ikekwe na-egosi na ọ chọrọ ikwe ka oge gafee ruo mgbe echefuru ọdịda a dị egwu.
Bodega, bu mbido nke Silicon Valley nke choro inye igwe na ere ihe nwere ngwaahịa anaghị emebi emebi na ụlọ, mgbatị ahụ, họtel ... na-etinye onwe ya dị ka asọmpi maka ụlọ ahịa ndị a na-ahụkarị nke ọtụtụ obodo ndị na-emeghe oge niile na ebe anyị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ngwaahịa, site na nsí ezé, na akwụkwọ mposi, gụnyere mmiri ara ehi, ọka, ihe ọ softụ softụ dị nro, salads… Ọrụ ahụ dị mfe, ebe ọ bụ na a na-akwụ ụgwọ ya site na ngwa mkpanaka, koodu ahụ abanye na igwe na-ere ahịa ma nyefee ngwaahịa ahụ. Na-ada ụda na mbụ, mana ka mmejuputa malitere, ị malitere ịhụ nsogbu na echiche a.
Na otu aka, ekele Amazon Prime, ịkwesighi ịga ụdị igwe a iji zụta ihe ọ bụla. N'aka nke ọzọ, igwe na-ere ahịa nke ndụ, ha na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ na-enweghị iji ngwaỌ bụ ezie na ọ mara ezigbo mma maka onye ọrụ, ọ bụghị ezigbo ahụ iru ala ma ọ bụ bara uru. Mana nsogbu kasịnụ dị n'aha ahụ, ebe ọ bụ na wineries bụ aha e nyere ụdị ụlọ ahịa ndị a ebe anyị nwere ike ịchọta ngwaahịa ọ bụla, azụmaahịa ndị na-etolite akụkụ dị mkpa nke ụdị mmekọrịta nke ọtụtụ obodo na igwe ndị a bụ ihe iyi egwu. Na mgbakwunye, ụdị igwe ndị a enweghị ike inye anyị kọfị dị ọkụ ma ọ bụ nri ụtụtụ na-ekpo ọkụ mgbe anyị na-aga ọrụ.
Okwu okpu Atari
Ka anyị na-etolite, ụzọ anyị si eche echiche na-agbanwe nke nta nke nta, ọ na-adịkarịkwa ka nke ndị na-eto eto. O sina dị, enwere echiche ndị enwere ike ịkọwa dịka ọkụ ọkụ, dị ka okwu ahụ na-ekwu, n'agbanyeghị afọ ole ị dị. Atari malitere n'afọ a a baseball okpu na ọkà okwu gụnyere Ha na Bluetooth na-ekwu okwu site na isi iyi. Ebumnuche nke Atari bụ ịre ya n'etiti ndị hụrụ egwuregwu n'anya bụ ndị na-achọghị ịkọrọ onye ọ bụla ihe ụtọ ha maka egwu ma ọ bụ maka ndị ahụ chọrọ ịkekọrịta mkparịta ụka ha na gburugburu ebe ha na-eme mgbe ị na-agagharị n'ogige ahụ.
Ugbu a, ekweisi ikuku ejirila bụrụ ngwa ọrụ kachasị mma iji gee egwu kachasị amasị anyị na-enweghị nsogbu gburugburu anyị, na mgbakwunye na ikwe ka anyị nwee mkparịta ụka n'ụzọ ezi uche, Atari na-aga ma malite ngwaahịa a, ngwaahịa nke ugbu a ị nwere ike ịchọta ụfọdụ nkeji maka ihe dị ka $ 130.
Ramen bụ nri ndị Japan nwere ụdị dị iche iche nke noodles ndị China na-eri na ofe. Iji gosi nkwanye ugwu n’ebe onye na-esi nri nọ, ozugbo anyị gụchara ya, anyị ga-eme ya slurp ofe, na-enye ụda ihu igwe na nke na-adịghị mma bụ nke a na-ahụkarị na Ọwụwa Anyanwụ ma ghara iwe iwe dị ka ọ na-eme na West. Onye isi ụlọ ọrụ ramen na Japan, agbaala mbọ mepụta ngwaọrụ akpọrọ Otohiko, nke bụ ọrụ maka igbochi mkpọtụ a na-eme mgbe ị na-ete ofe ahụ, ngwaọrụ nke ọ bụrụ na ọ jisie ike dọta mmasị karịa mmadụ 5.000, ga-eru ahịa $ 130.
Ọzọ ọrụ nke gadget bụ jikọtara na ngwa mkpanaka, ngwa nke kwesiri i buputa uda site na ife di iche nke n’eti nkpu di egwu mgbe a na-ete ofe. Ngwaọrụ a anaghị egbochi mmiri, yabụ anyị ga-asachapụ ya ngwa ngwa oge ọ bụla anyị gụchara ramen ma batrị dị otu awa.
N’elu, anyị kwuru maka okpu baseball nke Atari nke anyị nwere ike ịkekọrịta mkparịta ụka anyị na ndị niile gbara anyị gburugburu, ọnọdụ nke nwere obere ìgwè mmadụ nwere ike ịmasị ya. Maka ndị ahụ, ndị dị oke anyaụfụ maka nzuzo ha ha achọghị ka onye ọ bụla nọ ha nso mara ihe ha na-ekwu.Mgbe anyị nwere Husme, ngwa ọrụ nke mechiri ọnụ anyị niile ka ọ ghara ịda ụda olu anyị ka ndị nọ anyị gburugburu ghara ịma ihe anyị na-ekwu.
Na mgbakwunye, ọ na-abịa na ekweisi ka anyị wee nwee ike ịkpọ oku na-enweghị aka. Ma mgbe o gosipụtara CES ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ chere na ọ ga-atọ ụtọ. tinye ụda ndị si na ndị na-ekwu okwu na mpụga, dị ka ụda nke R2-D2 wepụtara ka ọ dọpụ uche ya karịa na ọ dịghị onye na-anwa ịchọpụta ihe anyị na-ekwu, ọ bụ ezie na ejiri m obi m niile kwenye na a ga - enweta ihe ọzọ Ngwaọrụ a, dịka ọ pụrụ iju anya dịka ọ nwere ike iyi, nwetara ego dị mkpa iji mezuo ya, anyị nwere ike ịchọta ya maka dollar 189.
Ná mmalite nke afọ, ogologo oge tupu Mark Zuckerberg depụtaghachila ihe niile gbasara Snapchat n'elu iji jikọta ya na Instagram, Snapchat malitere ugogbe anya maka anwụ nke mere ka anyị nwee ike. dekọọ vidiyo ruo 10 sekọnd ogologo na na-uploaded na-akpaghị aka na akaụntụ anyị. Ọnụ ya: $ 150. Ihe ịga nke ọma ya: ọ baghị uru. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ edebela ọtụtụ ihe ndị mejupụtara nke bụ akụkụ nke iko ndị na-enweghị atụ, na-eche ka ha hụ ma ha nwere ike imeziwanye echiche ahụ n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ tufuo foduru ma chefuo maka ọdịda a dị egwu. Na Ngwa ugbu a anyị nwere ohere ịnwale ha n'isiokwu a.
Goolge achọghị ịhapụ ya na ọgbọ nke abụọ nke Google Pixel, ọ malitere Google Pixel Buds, ekweisi ikuku na O gosipụtara onwe ya dị ka onye ntụgharị asụsụ kachasị mma n'ịntanetị mgbe anyị na-aga njem, ma o gosipụtawo ọrụ dị nnọọ mma ma belata, karịsịa ma a bịa n'ihe banyere mkparịta ụka mkparịta ụka na mgbe asụsụ e ji mee ihe abụghị nke Roman, dị ka Chinese ma ọ bụ Japanese. Na mgbakwunye, anyị ga-enyefee onye na-ekwu okwu ekwentị ahụ ka ọ nwee ike ịgwa ya okwu na ọ ga-eleba anya na iji Google Translate iji zipu ntụgharị asụsụ na ekweisi, ọnọdụ na-enweghị isi n'agbanyeghị etu i si ele ya anya.
Mana ọ bụghị naanị ọghọm nke ekweisi ndị a, ebe ọ bụ na àgwà ha na-ahapụkwa ihe a chọrọ. Iji malite, n'agbanyeghị na etinyere ha na ntị, ha anaghị ewepụ ihe ọ bụla site n'èzí. Igbe ebe echekwara ha ka ha chajue ma bugharịa ha anaghị emechi nke ọma ma mepee. Vkpọ oku Google nnyemaaka dị njọ karịa emeri lọtrị na-eji megharịa ọnụ aka interface na mpụga nke ekweisi na-arụ ọrụ kwa mfe.
Ekwentị dị mkpa a na-eche ogologo oge, nke ahaziri n'okpuru tutelage nke Andy Rubin, bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kachasị atụ anya na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ozugbo ekwuputara na odi na ahia ya, ekwuputala oge na otutu ọnwa, na-agwụcha ndidi nke ọtụtụ ndị ọrụ na ha na-eche ya nakwa na ha mechara họrọ ngwaọrụ ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, nsogbu dị na igwefoto dị na ngwaọrụ nke ihe karịrị 700 dollar yana njedebe nke nkesa ya naanị na United States, enyerebeghị ọnụ ahịa a aka ka ọ ree ezigbo ego.
Maka ihe eji megharịa ọnụ, ọnwa ole na ole mgbe ị kụrụ ahịa, anyị nwere ike ịchọta ya maka dollar 450, ọnụahịa dị ala karịa nke ọ nwere mgbe ọ rutere n'ahịa. Mana n'agbanyeghị nsogbu na ndakpọ olileanya niile nke ọdụ ụgbọ a kpatara, Andy Rubin kwuru n'izu ole na ole gara aga na ha na-arụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ nke ọdụ a. Ka anyi nwee olile anya na ha adighi eme ihe ojoo dika nke mbu ma na opekata mpe usoro nkesa na-enye ha ohere inweta ha na mba ndi ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ kachasị njọ nke 2017
Sony mbụ ama ama na-enweghị okpokolo agba enweworị aha: Sony Xperia A Edge